Ciidamada Amisom oo Qarax lagula eegtay Muqdisho – AfmoNews
Warar dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan qarax geystay khasaaro kala duwan oo maanta agagaarka Masaajidka Turkiga ay dhiseen oo ku yaalla wadada u dhaxeysa Xaafada Jamhuuriya iyo Isgoyska fagax lagula eegtay Ciidamo ka tirsan Amisom.
Qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu Aaso ayaa lala eegtay Kolonyo gaadiid ah oo ay wateen Ciidamo ka tirsan Amisom gaar ahaan kuwa Burundi, kuwaas oo ku wajahnaa Xerada Maslax ee degmada Hurwaa oo farriin ay ku leeyihiin.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in qaraxa kadib Ciidamada Amisom ay rideen rasaas fara badan oo u badneyd qorayga dhashiikaha ah ee gaariga ugu xiran.
Mas’uuliyiin ka tirsan gaadiidka gurmadka deg dega ee Amin Ambulance ayaa waxa ay sheegeen in inta ay xaqiijiyeen 5 ruux ay ku geeriyootay 9 kalena ay ku dhaawacmeen rasaasta ay fureen Ciidamada Amisom qarax kadib, dadkaas oo u badan kuwo degan meel u dhow halka qaraxa uu ka dhacay.
In ka badan laba Saacadood ayaa waxaa hakad galay isku socodka dadka iyo gaadiidka, kadib markii ay Ciidamada Amisom joojiyeen, hayeeshee markii dambe ay dib u fureen, iyaga oo socdaalkodii iska sii watay.